Kedu ka UST siri ike nke atọ si daa - CoinWorldMap
Kedu ka nke atọ kasị ukwuu stablecoin UST dara
Mee 10, 2022 Binance, Bitcoin, Defi, Ethereum
Ụkwụ ego nke atọ kasị ukwuu n'ụwa, TerraUSD (UST), ewepụla site na dollar US - ọ na-ere ahịa na $ 0,62 na Tuesday - ma tụfuo ihe karịrị ijeri $ 4 n'ahịa ahịa.
Isi akụ nke UST, LUNA, tụfuru ijeri $20 n'ime ụbọchị asaa. Ndị na-eji gburugburu ya Defi ⏤ N'izu ole na ole gara aga, ha ji $29 ijeri nkwụnye ego ⏤ ha wepụrụ ijeri $16 ọzọ.
Terraform Labs, nke South Korea na onye ijeri Singapore bụ Do Kwon tọrọ ntọala, na-ekwu na UST nwere ike ịkwado. ịkwụ ụgwọ na $1,00 US site na algọridim kama ijide dollar US na nchekwa dị ka ọdịnala stablecoins Tether (USDT) ma ọ bụ Circle (USDC).
Iji jikwaa mkpọ ahụ, UST na-adabere na ọnụego mkpezi nke mkpali maka akara ngosi LUNA "nhazi" ya na akụ dị iche iche nke ndị njikwa akụ na ụba na-ere ⏤ ebe ọ bụla na-ekwu na a ga-ewepụ ya.
N'ezie, ndị njikwa asaa na-eme ọtụtụ mkpebi gbasara ịnyefe, oke ego, na ịzụ ahịa nke akụ ha. UST na-ere ahịa na $0,74 na Tuesday, ka TradingView si kwuo.
Terra's stablecoin atụfuola mkpọ ya
Ọ malitere n'abalị Satọde, Mee 7, mgbe mmadụ wepụrụ UST maka nde $ 84. Ndị ọrụ amalitela mkpesa maka mwepu a na-enyo enyo na Curve, otu n'ime ọdọ mmiri DeFi kacha ukwuu maka UST. Do Kwon mechara weghaara ọrụ iwepu ego ahụ, na-emesi ndị ọrụ obi ike na a na-achịkwa ihe niile. Ọ gbakwụnyere: "O doro anya na ọ nweghị ihe mkpali maka TerraForm Labs iwepụ UST nkeonwe."
Ọnọdụ ahụ malitere ngwa ngwa. N'ịbụ onye adalarị ijeri $ 3 na Satọde, azụ azụ LUNA UST tụfuru ijeri $ 2 ọzọ na Sọnde. UST malitere ịzụ ahịa cents abụọ n'okpuru $1 mgbe niile.
Mgbe ahụ enwere nnukwu ọdịda. Na Mọnde na 11:45 ụtụtụ EDT, $250 na-ere ahịa na Kraken na $000. Ndị na-ekpe ikpe gbalịrị iweghachi njikọ ahụ ruo ọtụtụ awa ma daa. Mgbe awa ole na ole gachara, ihe mgbochi UST malitere ikpochapụ na $0,77, emesia $0,90, wee laghachi n'etiti $0,87. Mmiri wụbatara na mgbanwe ụwa.
N'ikpeazụ, anụ ọhịa bea weghaara obodo LUNAtics na Terra, na-akụda UST na $ 0,62 na ụfọdụ nyiwe. Oge a ọ bụghị ihe dị ka ọtụtụ narị puku dollar, kama ihe dị ka ijeri dollar.
A nụrụ kepu kepu na Binance naanị na-ajụ iwu n'okpuru $0,70. N'oge na-adịghị anya mgbanwe mgbanwe kasị ukwuu n'ụwa kwụsịrị ịwepụ na LUNA iji kwụsị ire ere.
Do Kwon mehiere obere mgbe o kwuru na otu ụlọ ọrụ na-edozi 62% nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ọdọ mmiri. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, ọ nwere ike bụrụ ihe akaebe na-egosi na a na-emegharị ahịa. Agbanyeghị, ọ ehichapụrụ tweet ahụ mgbe ọ matachara na akara 62% bụ “ọzọ” na eserese achịcha.
N'oge mkpọda mmiri, otu obere akpa tụfuru $84M nke UST na Ethereum blockchain na $108M na Binance. Do Kwon kwuru na nrụpụta ahụ abụghị "nke anyị" ma kwuo na ọ na-ewe onye ọkachamara n'ahịa ahịa nke nwere ike igbochi UST ịtọgharịa.
Ihe ahụ merenụ mere ka a na-atụgharị uche banyere ịkpachapụ anya nke ahịa ahịa na-ejikọta ya na obere ọnọdụ na tweet na-adịghị mma. Ndị ọzọ zoro aka na nyocha teknụzụ dị mfe. Kwon chetara mkpa ọ dị ileghara "cryptocurrency Twitter" wee kpọọ ihe ọchị na ndị na-emetụta mgbasa ozi ọha.
Kedu ka UST si bụrụ mkpụrụ ego ijeri dollar ọtụtụ ijeri
Ọ bụ ezie na Terra tụlere ọtụtụ ikpe maka UST, nzọụkwụ mbụ na-aga nke ọma bụ Protocol Mirror. N'ebe a, Do Kwon kwalitere UST dị ka ụzọ isi gosipụta azụmahịa ngwaahịa sịntetik. Ndị na-ere ahịa nwere mmasị n'ịgba nzọ n'ụdị "enyo" nke ebuka US.
Ọ baghị uru ikwu, Kwon edebanyeghị akụ nke Mirror Protocol na Securities and Exchange Commission (SEC), na-eduga na ịgba akwụkwọ na-aga n'ihu. Otú ọ dị, Terraform Labs na Do Kwon kpebiri ịlụ ọgụ n'ụlọ ikpe - ha na-ebo ebubo mmebi na omume nke SEC, dị ka mmebi nke ikike usoro mgbe ị na-eje ozi n'elu escalator na Kwon n'oge ihe omume crypto.
Mgbe enyo gachara ọganihu ọzọ Tupu Kwon, Anchor (ANC) nọ na mpaghara iji UST. Onyinye kachasị nke Anchor bụ nkwụghachi pasent 20 na nkwụnye ego UST nke Terraform Labs na-akwado. Arịrịọ maka UST rịrị elu ngwa ngwa.
Na-eche na UST na-echekwara na $1, ndị investors gburugburu ụwa zụtara UST ma tinye ego na Anchor. N'ịbụ ndị a kwadoro na UST, ha malitere irite 20% kwa afọ ⏤, bụ nke karịrị ọnụ ahịa ọmụrụ nwa na agbụ ma ọ bụ akaụntụ ụlọ akụ ọ bụla.
Tweet ehichapụrụ ugbu a nke Do Kwon na-ekpughe na ya enweghị ike ịgụ chaatị achịcha.
Ọtụtụ ijeri dollar zụtara UST, na-enye TerraForm Labs akụ ọtụtụ ijeri dollar iji jikwaa. Terra tozuru oke ikenye ijeri $1,5 iji mee ka UST guzosie ike na "Luna Foundation Guard" ọhụrụ - ọ zụrụ. Bitcoin.
UST enwetabeghị peg ọnụ ahịa $1,00 ya - n'oge mgbasa ozi, UST na-ere ahịa na $0,91. Ọtụtụ iri ijeri dollar apụọla n'ihe gbasara gburugburu ebe obibi ya. Ọ bụrụ na Terra tụfuru ijeri ijeri ya fọdụrụ, ma ọ bụ UST agaghị eweghachite peg ya, ọdịda Terra nwere ike nweta nsonaazụ maka DeFi maka izu ndị na-abịa.
Tectona na-etinye $5M na Fuse Labs
D-ETF na-echekwa $50M tupu ire ọha